La ciyaar Tetris-ka Android-kaaga | Androidsis
La ciyaar Tetris-kaaga Android-ka ah
PiliHuertas | | Ciyaaraha Android, Noticias
Immisa xusuus ayaan ku leeyahay Tetris! Anigana waxaan qiyaasayaa in haddii aad 30 jir tahay iyo wixii ka weyn, sidoo kale. Hadda waxaan nahay waddo dheer oo ka fog markii Tetris lagu ciyaarayay ciyaaraha fiidiyowga ee baararka ama qolalka ciyaarta fiidiyowga, hadda haddii qof doonayo inuu wax ciyaaro waxa uu soo dejiyaa waana taas. Xaqiiqdiina waad yareyn kartaa kan Nooca rasmiga ah ee EA Mobile's Tetris kaliya $ 2.99.
Waxaan leenahay ciyaarta 4 luqadood, midkood waa Isbaanish, waxaana lagu ciyaari karaa laba qaab. Marathon, taas oo noqon laheyd qaabka caadiga ah. Magic, Halka ay tahay inaad ka tirtirto khadadka iyadoo loo eegayo ujeeddooyin gaar ah iyada oo loo mahadcelinayo 4 qalab:
Yareeyaha, si loo yareeyo cabbirka baloogyada oo hal jibbaaran 1 × 1.
Duubista Xumbada, si ay baloogyadu u noqdaan warqad xumbo oo markaa ay awood ugu yeeshaan inay ku shubtaan inta ugu badan ee suurtagal ah waqti cayiman.
Sixir crayon, si loogu beddelo baloogga dhacaya oo mid kale oo shaashadda aan ku sawirno.
Burburka, si 4 miino u dhacaan si ay u burburiyaan baloogyada.
Si loo ciyaaro xakamaynta taabashada waxaa fiican in loo isticmaalo kaliya heerarka ugu horreeya, maxaa yeelay heerarka horumarsan waa jahawareer. Garaafka, dhinaca kale, waa wax fiican. Hagaag, waxaad ka aragtaa fiidiyaha.
Si aad u soo dejiso, guji halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » La ciyaar Tetris-kaaga Android-ka ah
Android 3.0, Honeycomb, T2, Samsung, taariikho, wax kasta oo ilaa iyo hada la xanto waxaad ku haysaa halkan
Youtube loogu talagalay Android gabi ahaanba waa la qaabeeyey oo hadda laga heli karaa Suuqa Android